Kungani Khetha u-Lightman
Ukukhanya kwe-LED Panel ekhanyisiwe
Ukukhanya kwe-Edge Frame ye-LED ekhanyisiwe
Isibani se-LED Panel esikhanyiswe emuva
Ukukhanya kwe-UL & DLC LED Panel
Ukukhanya kwePaneli ye-LED ephathekayo
Iphaneli ye-RGB ne-RGBW ne-RGBWW ye-LED
Ukukhanya kwePaneli ye-Frameless ne-Sky
Amalebhule amaningi we-LED Light Light
Iphaneli ye-LED Downlight
I-Square LED Panel Downlight
Isibani Esiphezulu Sokukhanya KwePaneli ye-LED
I-Surface Square LED Panel Light
Umbala ophindwe kabili we-LED Light
Isibani sephaneli esiyindilinga enkulu
Ukukhanya kwe-LED okuqondile
Isibani Esikhanyisiwe Esikhanyisiwe se-LED
Ukumiswa kwe-LED Linear Light
I-Surface egibele ukukhanya komugqa we-LED
UVC-B Inzalo Lamp
UVC-C Inzalo Lamp
Ukusonga UVC Sterilizer Wand
I-UVC Sterilizer Wand ephathekayo
Isibani se-E27 UVC
Ucingo UV Sterilizer Lamp
Ibhokisi le-UVC Sterilizer
Indlu yangasese ye-UVC Sterilizer Lamp
Isibani se-222NM Far-UVC Germicidal
IPIR Sensor 222NM Far-UVC Germicidal Lamp
Ishubhu le-222NM Far-UVC Germicidal
I-Doorknob UVC Lamp Germicidal Lamp
Isibani se-Doorknob LED UVC Germicidal Lamp
Isikole Nemfundo Yunivesithi
Ukunakekelwa Kwezempilo & Igumbi Elihlanzekile
Shop & Store & Isuphamakethe
Ijimu & Indawo Yezemidlalo
Subway & Isitimela Station
Manzi Series Isicelo
Isicelo se-Frameless Series
Isicelo se-RGB & RGBW ne-RGBWW
Isicelo se-Panel Panel Downlight Series
Isibani Esikhulu SamaPhaneli
Kwenziwe ngentando Panel Khanyisa Isicelo
Umhlahlandlela Wokufaka Umkhiqizo
Ukushoda kwephaneli le-LED kuyabakhathaza abenzi be-smart-phone be-Android
Wonke umuntu ufuna isibonisi se-OLED kumakhalekhukhwini wakhe, akunjalo? Kulungile, mhlawumbe hhayi wonke umuntu, ikakhulukazi uma kuqhathaniswa ne-AMOLED ejwayelekile, kepha ngokuqinisekile sifuna, asikho isidingo, i-4-plus inch Super AMOLED ku-smart-phone yethu elandelayo ye-Android. Inkinga ukuthi, azanele nje ukuthi ungahamba ngokuya nge-isuppl ...
"Iphaneli ye-LED light light plate laser engraving machine" idlulise ukuhlolwa komkhiqizo okusha
Muva nje uBoye Laser wethule uchungechunge olusha lokuqopha ipuleti laser lokuqopha ukukhanya - “Iphaneli ye-LED ekhanyayo yokukhanya komhlahlandlela womshini wokuqopha we-laser”. Umshini usebenzisa ubuchwepheshe obunamandla bokugxila kanye nobuchwepheshe obuningi bokuxazulula inkinga yokuphazanyiswa kwemiphetho nefu ...
IPanasonic yaseJapan yethula izibani zepaneli ze-LED zokuhlala ngaphandle kokukhanya futhi iqeda ukukhathala
UMatsushita Electric waseJapan ukhiphe isibani se-LED panel yokuhlala. Ukukhanya kwephaneli le-LED kusebenzisa ukwakheka kwesitayela okungacindezela ngempumelelo ukukhanya futhi kunikeze imiphumela emihle yokukhanyisa. Lesi sibani se-LED ngumkhiqizo wesizukulwane esisha ohlanganisa i-reflector ne-light guide plate ngokuya nge-op ...
Izinkomba ezine noma ubone ngokucacile umgomo olandelayo wezinkampani zokukhanyisa ze-LED
NgoJuni 2015, i-Guangzhou International Lighting Fair, umbukiso omkhulu wokukhanyisa emhlabeni, yaphela. Ubuchwepheshe obusha kanye nezitayela ezethulwe kulo mbukiso kwaba imbangela yomkhakha. Kusukela ekwakhiweni kokukhanyisa kwendabuko kuya ekukhanyeni kwe-LED, iPhilips nezinye izinto ...
Isibani se-LED, isibani se-xenon, isibani se-halogen, okuyinto esebenzayo, uzokwazi ngemuva kokuyifunda
Isibani se-Halogen, isibani se-xenon, isibani se-LED, okuyinto eyodwa esebenzayo, uzokwazi ngemuva kokuyifunda. Lapho uthenga imoto, abanye abantu bangakushaya indiva kalula ukukhetha kwamalambu emoto. Eqinisweni, amalambu emoto ayalingana namehlo emoto futhi angakhanya ebumnyameni. Uma ubheka umgwaqo ongaphambili, izimoto ezijwayelekile zine ...
I-Lightman iholele izinzuzo zokukhanya kwephaneli
Gqugquzela amandla emnothweni wekhabhoni ephansi emhlabeni wonke namhlanje, unciphise ukusetshenziswa kwamandla, uthuthukise ukusebenza kahle komsebenzi kube yisivumelwano somphakathi. Kulesi simo, u-lightman wabeka "isiphepho sokususa" emkhakheni wezibani zasendlini, futhi wethula ilambu elisha le-LED. UTh ...
Yini ebangele ukuthi ukukhanya okuholelekile kube mnyama?
Ukukhanya kwe-LED kumnyama kakhulu, kuvame kakhulu. Ukufingqa izizathu zokwenziwa mnyama kwamalambu e-LED akuyona enye into ngaphandle kwamaphuzu amathathu alandelayo. Ukulimala komshayeli ubuhlalu bezibani ze-LED kuyadingeka ukuthi busebenze ku-DC low voltage (ngezansi kwama-20V), kepha ama-mains ethu esiwahlinzekayo yi-AC high voltage (AC 220V). Ku ...
Kungani ukushisa kombala kwe-LED kudume kakhulu kulezi zinsuku?
Kuyaziwa ukuthi ukuthatha izithombe uhla olusondele lapho ukukhanya kumnyama kakhulu, noma ngabe ukukhanya okuncane nokukhanya okumnyama kokuthwebula izithombe, akukho flash engadutshulwa, kufaka phakathi i-SLR. Ngakho-ke ocingweni, iveze ukusetshenziswa kwe-LED flash. Kodwa-ke, ngenxa yomkhawulo ...
Yiziphi izinto ezinhlanu eziyinhloko ezizothinta impilo yesikhala samalambu e-LED?
Uma usebenzisa umthombo okhanyayo isikhathi eside, uzothola izinzuzo ezinkulu kwezomnotho futhi wehlise i-carbon footprint yakho. Ngokuya ngokwakhiwa kwesistimu, ukunciphisa ukukhanya okukhanyayo kuyinkqubo ejwayelekile, kepha kunganakwa. Lapho ukucucuza okukhanyayo kuncishiswa kancane, uhlelo luzohlala lusesimweni esihle ...
Ubuchwepheshe obuthathu obukhethekile bezibani zamaphaneli aholelwe
Ukusebenza kwe-Optical (ukusatshalaliswa kokukhanya): Ukusebenza kokukhanya kwezibani zephaneli le-LED ikakhulu kufaka phakathi izidingo zokusebenza ngokuya ngokukhanya, i-spectrum ne-chromaticity. Ngokwenqubo yakamuva yemboni "Semiconductor LED Test Method", kune-pea ekhanyayo kakhulu ...
Inqubo yokukhiqizwa kwenqubo yokukhanyisa ukukhanya kwephaneli ye-LED
Njengohlobo lokukhanyisa imikhiqizo ye-elekthronikhi, izibani zephaneli ze-LED zidinga izindlela nezindlela zokuphatha zekhwalithi eziqinile nezindayo ukuqinisekisa ukuthembeka kwekhwalithi, kufaka phakathi ukusebenza kwezinzuzo nobubi, ukuzinza kokusetshenziswa, kanye nesiqinisekiso sempilo. Ngokuvamile, kusuka ku-r ...
Izingxenye zokukhanya kwephaneli le-LED nemininingwane yezobuchwepheshe
Ngokuthuthukiswa komkhakha wokukhanyisa we-LED, ukukhanya kwephaneli le-LED okususelwe ekukhanyeni kwasemuva kwe-LED, kunokukhanya okufananayo, akukho ukukhanya, nesakhiwo esihle, ebesithandwa ngabantu abaningi futhi okuyisimo esisha semfashini yesimanje yokukhanyisa kwangaphakathi. Izingxenye eziyinhloko ze-LED panel light 1. Panel li ...
Amathemba emakethe yesibani esimanje se-LED nendawo yokuthuthuka
Ukwakhiwa kwamalambu esimanje kule minyaka emibili edlule kungachazwa njengokuzikhukhumeza nokunganqandeki. Abenzi nabathengisi abaningi basebenzise ithuba lokuthatha lelo thuba futhi bahlasela lesi simo, esisheshise ukwakhiwa kwezigaba zamalambu zesimanje. Umqondo we-Lightman ngi ...
Umshayeli we-LED unamandla
Njengengxenye eyinhloko yamalambu e-LED, ukunikezwa kwamandla kwe-LED kufana nenhliziyo ye-LED. Ikhwalithi yamandla we-LED drive inquma ngqo ikhwalithi yamalambu e-LED. Okokuqala, ekwakhiweni kwesakhiwo, amandla we-LED wangaphandle wedrayivu kufanele abe nomsebenzi oqinile wokungenwa ngamanzi; ngaphandle kwalokho, ayikwazi nge ...
Umshayeli we-LED unezixazululo ezintathu eziyinhloko zobuchwepheshe
1. I-RC Buck: ukwenziwa okulula, idivaysi encane, izindleko eziphansi, ayihlali njalo. Isetshenziswa kakhulu i-3W nangaphansi kokumiswa kwesibani se-LED, futhi kunengozi yokuvuza okubangelwa ukuwohloka kwebhodi lesibani, ngakho-ke igobolondo lesakhiwo lomzimba wesibani kufanele lifakwe ngci; 2. Amandla kagesi angahlukanisiwe: izindleko i ...
IHaoting Industrial Building, i-3rd Industrial Park, isiFunda i-Guangming, idolobha lase-Shenzhen, isifundazwe sase-Guangdong, 518106, PRChina